Cookies mabhuku maduku akawandiswa pamakombiyuta ako nemawebhusayithi aunoshanyira. Izvo zvinoshandiswa zvakanyanya kuitira kuti webhusaiti dzigone kushanda, kana kushanda zvakajeka, pamwe nekupa ruzivo kune veneti vesiti.
Iyi webhusaiti inoshandisa makiki anotevera:
Iyi cookie inodiwa kuti uwane iyi webhusaiti uye kuti ugadzire sangano. Iri coo rinoratidzika semutsara wakareba wemagwaro uye nhamba.
Google Analytics Unganidza mashoko pamusoro pekuti vashanyi vanoshandisa sei nzvimbo yedu. Tinoshandisa ruzivo rwekunyora mitsara uye kutibatsira kuti tivandudze nzvimbo. Ikoki inounganidza ruzivo mune fomu isingazivikanwe, kusanganisira nhamba yevashanyi kunzvimbo, apo vashanyi vauya kunzvimbo kubva nemapeji avakashanyira.
Mazhinji web browser vanobvumira zvimwe kutora maokie akawanda kuburikidza nekushandura kwekushandura. Kuti uwane zvakawanda pamusoro pekiki, kusanganisira kuti ungaona sei makiki akaiswa uye kuti ungatungamira sei uye unoabvisa, shanyira www.allaboutcookies.org.